I-USD/SGD Unxantathu weSimmetrical!
I-USD / SGD pair ibonise iimpawu ezigqithisiweyo kwaye ngoku ilwa kanzima ukunyuka phezulu. Isenzo sexabiso siphuhlise unxantathu we-symmetrical onokuzisa amathuba amakhulu okurhweba. Ngokusisiseko, i-USD yonyuswe ngcono kunedatha ebilindelwe yase-US ebixelwe izolo.
I-CB Consumer Confidence ixelwe kwi-113.8 ekude ngaphezu kwe-108.4 ekulindeleke, ngelixa iNtengiso yeKhaya eNtsha yaphuma kwi-702K ukuya kwi-800K, idlula uqikelelo lwe-755K. Iinkcukacha ezininzi ezintle ezixelwe namhlanje zinokunyusa i-USD. IMiyalelo yeMpahla eGqibelekayo yase-US, iMiyalelo yeMpahla eNxibelekayo, iMali yoRhwebo lweMpahla, kunye noLuhlu lweempahla lwe-Prelim lunokuzisa amanyathelo aqinileyo.
USD/SGD Uhlalutyo lobuchwephesha!
I-USD / SGD inokuphuhlisa umlenze ophezulu ukuba yenza ukuphuka okufanelekileyo kunxantathu we-symmetrical kwaye ukuba ithatha i-1.3487 kunye ne-1.3497 amanqanaba okumelana ne-static. Ukusilela kwayo ukwenza amazantsi amatsha asezantsi abonisa uxinzelelo oluphezulu.
Ngobuchwephesha, isibini sibhalise ukuqhambuka okusebenzayo ngaphezulu komgca we-150% weFibonacci kwaye ngoku uye watsiba ngaphezulu komgca wokuqala wesilumkiso (wl1) obonwe njengoxhathiso oluguqukayo.
I-USD / SGD iye yahamba emacaleni kwixesha elifutshane, i-upside breakout kunye nomgangatho omtsha ophezulu unokuvula umnyango wokukhula okuqhubekayo.
tags Forex, ukuseta urhwebo, Usd / sgd
I-USD / SGD yoQhekeko loPhumo luzisa ukuQhubeka!
I-USD / SGD ihamba ecaleni kwexesha elifutshane. Ihlile kancinci, kodwa i-bias isasebenza. Kungenxa yoko le nto sisenokukhangela amathuba amade. I-Index yeDollar iye yaqhubeka ukwanda, ke i-greenback inokuphinda iqale ukubonga.
I-USD ifumene uncedo kumabango e-US yokungasebenziyo kwiseshoni yayizolo. Isalathi sezoqoqosho sixelwe kuma-348K ngaphantsi kwama-362K alindelweyo kwaye kuthelekiswa nama-377K kwixesha lokwenza ingxelo elidlulileyo. Namhlanje, asinayo idatha ebalulekileyo evela e-US.
USD / SGD H4 Uhlalutyo lobuGcisa!
I-USD / SGD isashukuma ngokude ihlale ngaphezulu kwe-1.3626 yangaphambili ephantsi. Ihamba kuluhlu emva kokusilela ukuvala ngaphezulu kwenqanaba le-1.3651. Ukuqhekeka komqolo kuluhlu lwangoku kunokubonisa ukuqhubeka okungaphezulu.
Isimo esiphakamileyo sinokungasebenzi ngoncedo olusebenzayo olungezantsi kwe-1.3626 yangaphambili iphantsi. Ukukhula okungaphezulu kwe-DXY kunokunceda i-greenback iphinde iqhubeke nokuxabisa kwayo.
I-USD / SGD inokuphinda iqhubeke nokukhula kwayo ukuba ihlala ngaphezulu kwe-1.3626 nangaphaya kwenqanaba le-R2 (1.3631) yeveki.
tags Forex, ukuseta urhwebo, umvuld
USD / SGD Ukuqhubeka kwePateni!
I-USD / SGD yehlile kanye emva kokuba idatha ye-inflation yase-US ikhutshiwe kodwa isenokubuyela phezulu. Kuthengiswa nge-1.3419 ngexesha lokubhalwa emva kokuphinda uzame kwakhona i-pivot yemihla ngemihla ye-1.3414. Ukubuyela umva kwicala elilindelekileyo kulindelwe ngandlela ithile emva kokophula ngaphezulu komgca omkhulu wehla.
Isibini siphuhlise unxantathu kwi-H4 ebonwa njengepateni yokuqhubeka. Ireyithi itshintshile kancinci kwixesha elifutshane emva kokwaliwa okutsha kwindawo yenkxaso. Inokuhamba ecaleni ngaphambi kokuqinisekisa ungeno olutsha.
I-USD / SGD H4 Uhlalutyo lobuGcisa
I-USD / SGD ihlala kanye phantsi kwepivot ye-1.3420 nangaphantsi kwe-R1 yemihla ngemihla (1.3427). Ibambekile phakathi komgca we-pitchfork ephezulu (UML) kunye ne-50% yomgca weFibonacci.
Indawo ephakathi kwe-1.3406 kunye ne-1.3389 ibonwa njengendawo yenkxaso eyomeleleyo. Inokujikela kwicala elingasentla ukuba ihleli ngaphezulu kwayo. Ukulahla kunye nokuzinzisa kuphela phantsi kwale ndawo kunokungasebenzi kwimeko ebambekayo.
Ukuqhekeka okuphezulu okuvela kulo nxantathu nakwi-UML kunokuqinisekisa ukuba umlenze omtsha uphezulu. Ngokwenyani, ukutsiba kunye nokuvala ngaphezulu kwe-1.3437 ephezulu yanamhlanje kunokutsala abathengi abaninzi kwixesha elifutshane.
Ukudityaniswa kwangoku ngaphezulu kwe-1.3386 kunokuzisa ungeniso olutsha olude ukuba inqanaba liyatsiba kwaye lizinzile ngaphezulu kwe-1.3437 ephezulu.
tags sgd, Uhlalutyo Technical, Umbono woRhwebo, iUSD, umvuld
I-USDSGD iBullish Momentum
Ukuhlaziywa: 16 Februwari 2021
I-US iyikhanyele i-KL yangaphambili kwi-fake-out ye-bullish isakhiwo sokubambisa abathengisi kwinkqubo. Ngoku elo xabiso sele liza kwaphuka kunye nepennant kwaye ngaphezulu kwesantya esiphezulu sangaphambili sinokubuyisela amandla kwiveki ephelileyo ukuze siphinde sivavanye inqanaba eliphambili langaphambili.